Umlando wokudalwa kwezicathulo
Imfashini Yabesifazane Izicathulo
Wonke umuntu uyazi ukuthi umlando wokudalwa kwezicathulo uneminyaka engaphezu kwengu-1 000. Ngicabanga ukuthi okhokho bethu abade kakhulu baqagela kanjani ukugqoka imilenze yabo. Yayiyini isihlangu sokuqala? Izicathulo zashintsha kanjani ngokuhamba kwesikhathi? Kufinyelele kanjani ekubukeni kwanamuhla?
Umlando wokudala izicathulo ujabulisa kakhulu. Phela, zonke izikhathi zomlando zazinombono ohlukile wobuhle nokulula. Umbuso ngamunye, abantu ngabanye banamasiko kanye nezici zawo. Ngakho-ke, lezi zicathulo zihlukile kakhulu.
Izicathulo zokuqala zenziwe ngumuntu kuphela njengendlela yokuzivikela ezimo ezimbi zemvelo. Kwenzeka ngezikhathi zokushintsha kwesimo sezulu emhlabeni wonke. Ubani owayengacabanga ukuthi izicathulo ngeke zibe yindlela yokuzivikela kuphela, kodwa futhi isici sesitayela. Isazi-mlando saseMelika u-Eric Trinasus waseyunivesithi yangasese eWashington siphetha ngokuthi izicathulo zokuqala zavela eNtshonalanga Yurophu eminyakeni engama-26-30 000 edlule. Ukwenza lezi ziphetho, usosayensi wasiza ukutadisha amasaka abantu abahlala kule nsimu ngesikhathi sePaleolithic. Umcwaningi wakhathalela isakhiwo sezwane ezincane. Wabona ukuthi umunwe waba buthakathaka, futhi kamuva kwaba nezinguquko ekujuleni kwezinyawo. Lezi zibonakaliso kubonisa ukugqoka izicathulo. Ngokusho kososayensi, izicathulo zokuqala zazifana nezindwangu zamatshe ezenziwe ngamabhodlela asebele. Lezi zembatho zangasese zazingenwa ngaphakathi ngaphakathi ngotshani obomile.
EGibhithe lasendulo, izicathulo zase zivele zibonisa isimo somnikazi. Izikhwama zazivunyelwe kuphela uFaro nendlu yakhe. Kuyathakazelisa ukuthi umfazi kaFaro wayengekho phakathi kwalabo abakhethiwe, ngakho-ke waphoqeleka ukuba ahambe angagqoke izicathulo. Ngalezo zinsuku, izicathulo zaziyizicathulo ezenziwe ngamaqabunga esundu noma i-papyrus. Ngonyawo izimbadada ezinjalo zahlanganiswa ngosizo lwezinti zezikhumba. AbaseGibhithe abaphawulekayo bahlobisa lezi zingxube ngamatshe ayigugu nemidwebo ezithakazelisayo. Intengo yezidada ezinjalo zaziphakeme kakhulu. Isazi-mlando esingumGreki uHerodotus emisebenzini yakhe sathi ukukhiqizwa kwezimbadada ezimbili zikaFaro kwakushiywe inani elilingana nengeniso yonyaka yedolobha eliphakathi. Naphezu kwalokhu, esigodlweni sikaFaro nasethempeli kwakungavunyelwe ukuhamba ngezicathulo, ngakho-ke izimbadada zashiywa ngemuva kombundu. Izicathulo zanamuhla kunzima ukuzicabanga ngaphandle kwesithende, esakhiwe ngqo eGibithe lasendulo. Ngokungafani nezicathulo eziyigugu, izicathulo ezizithende zazingagqunywa ngabafari nabapristi, kodwa ngabalimi abampofu-tillers. Izindwangu zenza ukugcizelela okwengeziwe, kusiza abalimi ukuba bahambe ezweni elilimale.
Abase-Asiriya basendulo babegqoke izicathulo, okungcono kakhulu kunezicathulo zabaseGibhithe. Izicathulo zase-Asiriya zafakwa nge-back ukuze zivikele isithende. Ngaphezu kwalokho, babe nezicathulo eziphakeme ezindleleni zabo, ezibonakala zibukeka njenganamuhla.
AmaJuda asendulo kuleso sifunda ayephethe izicathulo ezenziwe ngokhuni, isikhumba, umoba kanye noboya. Uma isivakashi esihloniphekile sifika endlini, umnikazi kufanele athathe izicathulo zakhe ukuze abonise inhlonipho yakhe. Ngaphezu kwalokho, amaJuda anesiko elithakazelisayo. Uma ngemva kokufa komfowabo kwakukhona umfelokazi ongenamntwana, umkhwenyana wayephoqelekile ukuba amshade naye. Kodwa lona wesifazane angakhulula indoda engashadile kulo msebenzi, esusa esidlangalaleni izinyawo zesihlangu. Kuphela emva kwalokhu, insizwa ingashada nomunye owesifazane.
Izicathulo zokuqala, eziklanyelwe hhayi kuphela ukuvikela unyawo emonakalweni, kodwa nobuhle, zavela eGrisi lasendulo. Abadutshulwa baseGreki babengazi ukuthi bangenza kanjani izimbadada ezindala kuphela, kodwa nezicathulo ezinemuva, amabhuzu angenawo ama-endomas asezinyosi, amabhuzu anamnandi ngokuchofoza. Lezi zicathulo ezinhle zazidinga kakhulu abesifazane baseGrisi. Kodwa isenzakalo esibaluleke kunazo zonke emlandweni wezicathulo kwakungumthetho wamaGreki. Kuze kube manje, kwakungekho umehluko phakathi kwezicathulo zokunene nezesobunxele, baboshwa eceleni kwamaphethini afanayo. Kuyathakazelisa ukuthi ukuthuthukiswa kwezicathulo kuhlinzekwe kuma-courtesans aseGrisi asendulo. Kwakungenxa yokuthi labo abadutshulwayo babengazibophezela izicathulo zabo kuphela ngenxa yokuthi kwakukhona umkhondo emhlabathini ngokubhalwe ukuthi "Ngilandele."
Lena yingxenye encane yomlando wokwenza izicathulo. Okuthakazelisa kunazo zonke kusengaphambili.
Izizathu ezintathu zokuthenga izingodo kulobu busika futhi uzigqoke njalo!
Imfashini yekhulu lama-20
Ukuphakama kwesitayela: izithende ezifashini-2015
Izithende zakho nawe: konke okudingeka ukwazi abesifazane besimodeli
Amaphuzu aphambili okudingayo ukwazi ngezicathulo
I-TOP-5 enemfashini: izikhumba ezithakazelisayo ebusika 2016-2017
Indlela yokulala kahle indoda nowesifazane?
Izibonelo ze-manicure e-stylish ku-Halloween 2016
I-fungus - i-lesion yesikhumba engavamile
Ama-herbs amahle aphuzi aluhlaza
Amafutha abalulekile wamaJavane ne-verbena lemon
Borsch nge ingulube
I-Berry cobbler ne-peaches
U-Ksenia Sobchak ushiye isimemezelo ezinsukwini ezingu-10, isithombe
Ikhekhe le-ufulawa we-corn
Isaladi "u-Orange sika"
Amazambane abhakabisiwe nge-sauce ye-avocado
Khetha ukhilimu omuhle wesikhumba samafutha
Ukuthola enetheni: ukubuka ngokuningiliziwe kwamaketanga amahle kakhulu ehhotela emhlabeni